Shina: Bilaogera ara-politika nosamborina, nalaina ny solosainany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2019 4:17 GMT
Noraofina tamin'ny faran'ny herinandro teo ny solosain'i Guo Quan, mpiara-manorina ny antoko mpampiasa aterineto ao Shina sady mpisolovava tamin'ny raharaha fitoriana ny Yahoo! vao haingana ary efa nahavita dimy andro amin'ny folo andro hangadrana azy izy. Araka ny voalazan'ny gazety Guardian, dia natao ny fisamborana an'i Guo raha teny an-dalana hanatitra ny zanany lahy any an-tsekoly izy, noho ny “fampahalalam-baovao diso navoakany an-tserasera”.
Guo miaraka amin'ny zanany lahy. (Sary Boxun)
Avy amin'ny tatitry ny Guardian:
Tsy fantatra izay fanehoan-kevitra mampiahiahy ny manampahefana. Namoaka andian-dahatsoratra manakiana ny rafitra ara-politikan'ny antoko tokana komonista i Guo. Nesorina tamin'ny asany maha-mpampianatra tany amin'ny oniversite Nanjing izy tamin'ny herintaona.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nolazaina fa nanontany ny fepetran'ny hamehana manoloana ny horohorontany sy ny fiarovana ny fotodrafitrasa nokleary any Sichuan izy. Mihevitra ireo namany mpikambana ao amin'ny antokony madinika fa misy ifandraisany tamin'ny loza voajanahary tamin'ny herinandro lasa teo ny fanagadrana azy.
Mety hoe noho ny horohorontany nolazain'ny manampahefana Shinoa fa nahatonga ny fahasimban'ny tohodrano an-jatony ve? Sa ilay iray izay nolazain'ny governemanta voalohany fa ny toerana nokleary ao amin'ny faritra no voakasika, ary tsy nety nanome fanazavana antsipiriany, ka mahatonga ireo manam-pahaizana nokleary misalasala tamin'ny filazana taty aoriana fa efa voafehy ankehitriny ireo toerana nokleary ireo?
Manome fanadihadiana ara-teknika momba ny loza mitatao amin'ireo mponina ao an-toerana manoloana ireo tohodrano an-jatony ao amin'ny faritra misy horohorontany mivantana ny lahatsoratra farany momba ny ‘fitsapa-kevitra mikasika ny Demaokrasia’ nosoratan'i Guo Quan tamin'ny andian-dahatsorany lavabe talohan'ny fisamborana azy, ary manolo-kevitra amin'ny mponina ao amin'ilay faritra mba hifindra any amin'ny toerana avo kokoa, fanatsoahan-kevitra somary miverimberina satria efa noraisina indrindra ny dingana tahaka izany.
Ny Democracy Sounding , fizarana faha-218, talohan'ny voalaza etsy ambony, dia mitondra ny lohateny hoe “Mandrisika ny Antoko Komonista ao Shina mba hamoaka haingana tatitra momba ny fiarovana ireo toby nokleary any Sichuan ny Antoko Demaokraty vaovao ao Shina.”
Moa ve ny governemanta Shinoa, araka ny filazan'ny fampahalalam-baovao vahiny maro tamin'ity herinandro ity ka tena nampiseho fahamatorana tamin'ny fitantanana ny loza voajanahary, ny horohorontany, amin'ny alalan'ny fizakàna ny adihevitra na koa ny fanakianana ny setriny nataony? Miankina amin'ny hoe iza no anontanianao izany. Nitatitra ohatra ity mpanao gazety taloha sady bilaogera be mpamaky, Bullog, antsoina hoe Wen Yuanchao ity fa hatramin'ny 16 May, mpitsikera 17 raha kely indrindra no natao fanadihadiana noho ny fanehoan-kevitra natao an-tserasera: ny roa amin'izy ireo dia nosamborina, ny roa nasaina nanoratra fanambarana ny zavatra tsy mety atao ary ny 13 ambiny noterena hanaraka fampianarana momba ny fitsipi-pifehezana.